Ungaba kanjani i-cosmetologist?
Psychology and Relationships Umsebenzi
Kumelwe ngithi kuze kube ngu-2009, umsebenzi onjenge-cosmetologist wawuyingxenye ejwayelekile. I-Cosmetology njengomboni wezobuhle yayisanda kukhula, ngakho-ke zonke izinkinga ezithakazelisayo kwakudingeka zixhumana ne-kozhveerologu noma i-dermatologist. Namuhla, konke kushintshile futhi lesi siqondiso sesivele sihloniphekile, futhi sinenzuzo kakhulu. Indlela yokuba yi-cosmetologist - kulesi sihloko.
Ungaba kanjani i-cosmetologist futhi ungaqala kuphi?
Yiqiniso, ngezemfundo. Izinzuzo ezinkulu kulo mkhakha kanye nethuba lokuba enye yezinto ezinhle kakhulu inikeza imfundo yezokwelapha. Ukuba ne-diploma ye-dermatovenerologist, udokotela wezingane noma onguchwepheshe "wezokwelapha", kuzodingeka ukuthi ufunde uhlelo "cosmetology" futhi ungahamba ngokuzethemba futhi uqoqe ukuphakama kwalo msebenzi. Kodwa-ke, ngisho nangaphandle kwemfundo yezokwelapha, ungakwazi ukubona iphupho lakho. Ngenxa yalokhu kuyadingeka ukudlulisa izifundo ezikhethekile futhi uthole ikhethelo "cosmetologist-aesthetic". Lezi zinsuku zibeka ukulinganiselwa emkhakheni wezinsizakalo ezinikeziwe. Isibonelo, isazi esinjalo asikwazi ukwenza izinqubo ze-hardware cosmetology noma ukwenza imijovo, kodwa singazibonela ngokugcwele esikhunjeni esiyinkimbinkimbi nokunakekelwa komzimba.
Ulwazi oludingekayo emsebenzini:
isisekelo semvelo kanye ne-anatomy, isakhiwo sokwakhiwa kwesikhumba, izindawo zayo;
isimiso sokusebenza kwemishini ye-cosmetology, izici zokusebenza;
izinhlobo zezobuchwepheshe ze-cosmetology, isimiso sesenzo sabo, imiphumela emibi, izinkomba, amazinga okusetshenziswa, njll;
izinsisekelo zokuhlanzeka nokuhlanzeka;
imithetho yokuhlinzekwa kosizo lokuqala;
izitayela zamanje nezindlela ezintsha zakamuva emkhakheni we-cosmetology.
Labo abanesithakazelo kulokho okudingekayo ukuba babe yi-cosmetologist kufanele baqiniseke ukuthi isikhungo semfundo sinemvume yokuhlinzeka ngezinsizakalo ezinjalo, futhi abasebenzi abafundisa banolwazi olunzulu nolwazi oluningi lwengqondo.
Ungaba kanjani i-cosmetologist enhle?
Yiqiniso, ukuba khona kwe-diploma akuqinisekisi ukuthi abantu bazoya ehhovisi njengesixuku sonke. Kuthatha isipiliyoni, futhi ukuthola, kuhle ukuthola umsebenzi njengomsizi ku-cosmetologist. Lokhu kuzokuvumela ukuba uthole okungenani izisekelo eziyisisekelo, uqonde ukuthi ugcwalisa kanjani imibhalo, uqhubekele izinqubo ezilula futhi hhayi kuphela, ulungiselele iKhabhinethi emsebenzini, uhlanganise izidakamizwa, njll. Ezinye izinkampani zinikeza ukuqeqeshwa ngokwezindleko zenhlangano, okungafaka futhi amandla ekukhuleni komsebenzi .
Kodwa-ke, ngisho nolwazi oludingekayo nolwazi ngeke lukwazi ukuqinisekisa ukugeleza okungaphazanyiswa kwamakhasimende. Labo ababuza ukuthi bangaba kanjani i-cosmetologist ephumelelayo, kufanelekile batusa ukuba bafunde kabanzi kanye nezinselelo zesayensi yezokwelapha. Uchwepheshe ongapheli, okhuluma ngokungahambi kahle futhi ongajabulisi ongaphandle ngeke abange nesifiso sokubuyela ehhovisi futhi. Ngaphezu kokufaneleka, umuntu kumele abe nomqondo wokukhalipha, abe nomusa futhi aqonde. Kunoma yikuphi, unganiki isivakashi ithuba lokungabaza okuthile noma ukunquma ukuthi yini egcinwe kuso. Kubalulekile ukwakha isimo sokuphumula nokuthula futhi zonke izimo ezidingekayo ukuze ikhasimende lizwe likhululekile futhi likhululekile.
Udinga ukukwazi ukweluleka, ukuncoma, ukufakazela ukuthi lesi sidakamizwa sizosebenza ngempumelelo kwesikhumba salo kanye nezinkinga ezikhona. Yiqiniso, izincomo zakho zidinga ukusekelwa izincazelo zobuchwepheshe, kodwa ngolimi oluzwakalayo kude nemithi. Kubalulekile ukumkhuthaza ukuba abuyele emisebenzini yokubonisana noma yokwelashwa futhi futhi ancoma lochwepheshe onjalo kubo bonke abangane bakhe nabangane bakhe.
Umthelela wezobuchwepheshe ekuthuthukiseni umphakathi
Indlela yokuthola imali emzaneni?
Kukuphi ukutshala imali kwi-Intanethi?
Imibono yebhizinisi ngokutshalwa kwezimali okuncane - izindlela ezinhle kakhulu zokuthola imali
Ungaba kanjani isikhonzi sezindiza?
Ukuphathwa okuhlelekile - isisekelo, imisebenzi kanye nemisebenzi esemqoka
Ukuncintisana okungewona amanani
Ukubuka umqashi ohlala emsebenzini
Sebenza ngamaholide omphakathi
Incwadi yesimemo sokubambisana
Imithetho eyishumi yokuphumelela
U-Enrique Iglesias ujwayele ukujwayela izingane ezinezinyanga ezine ukuya ebhola
Izitshalo ze-Aquarium zabaqalayo
Ukulungisa ama-Strawberry - izinhlobo
Ukudla okunempilo kokukhula kwemisipha
I-manicure yogurt - iresiphi
Indlela yokwenza umfana amanga?
Indlela yokuphatha ukukhwehlela ukukhwehlela kwengane?
Isitayela semfundo semfundo
Ukudonga izindonga ngephepha lodonga
Ikhekhe le-cherry elifriziwe
I-Immediately Infant Death Syndrome
I-Roaccutane kusuka e-acne - umsindisi wesikhumba senkinga
Ukucubungula - izimpawu ezinganeni
UJamie Pressley noMargot Robbie
Ukuqukethwe kwekhalori yenkukhu
Indlela yokwenza i-batter yenkukhu?
Izingubo ezifashisayo kakhulu
Ukungaqondakali okungaqondakali kokuziphatha kwesilwane
Ukuzivocavoca ngemuva ngemuva kwebhola
Indlela yokuphuza i-ginger ngendlela efanele?
Umthandazo wokumemezelwa kukaMariya uMariya oNgcwele ngesikhathi sonke